Dambudziko Rokuparara Kwezvinhu
Nomusi weChishanu, 11 March 2011, kuJapan kwakaitika kudengenyeka kwakaipisisa kwakauraya vanhu vanodarika 15 000, kuchibva kwaparadza zvinhu zvinokosha mabhiriyoni anodarika US$200. Vanhu pavakanyeverwa kuti kwaizoita tsunami, Kei ane makore 32 akatizira kunzvimbo yakakwirira. Kei akati, “Mangwana acho ndakadzokera kumba kuti ndinotora zvinhu asi ndakawana zvose kusanganisira imba zvayeredzwa nemvura.
“Zvakanditorera kanguva kuti ndibvume kuti chokwadi zvinhu zvangu zvaparara. Ndakanga ndisisina mota, makombiyuta andaishandisa pabasa, matebhuru, macheya, sofa revaenzi, magitare, zvinhu zvangu zvokupendesa zvandainyanya kuda, nemapikicha andakanga ndadhirowa.”
Edza kuisa pfungwa pane zvaunazvo kwete zvausisina. Bhaibheri rinoti: “Kunyange kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.” (Ruka 12:15) Kei anoti: “Pakutanga ndakanyora pasi zvinhu zvose zvandaida, asi izvozvo zvakaita kuti ndiwedzere kurwadziwa pandaifunga zvandakanga ndarasikirwa nazvo. Ndakazonyora zvinhu zvainyanya kukosha, uye izvi zvakandibatsira kuti ndisanyanya kunetseka.”
Tanga kunyaradza vamwe panzvimbo pokuti urambe uchizvidya mwoyo nezvedambudziko rako. “Vanhu vaindipa zvokurarama nazvo, asi izvozvo zvakaita kuti nditange kuzvitarisira pasi,” anodaro Kei. “Ndakabva ndayeuka vhesi yomuBhaibheri iri pana Mabasa 20:35 inoti ‘kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.’ Sezvo ndakanga ndasara ndisina chinhu, ndakanga ndisina chokuti ndingapawo vamwe. Saka ndakatanga kunyaradza vamwe. Kuita izvi kwakaita kuti ndisaramba ndichifunga nezvedambudziko rangu.”
Namata kuna Mwari kuti akupe uchenjeri hwezvaungaita nedambudziko rako. Kei aiva nechokwadi nezvinotaurwa neBhaibheri kuti Mwari ‘anoteerera minyengetero yevanotambura.’ (Pisarema 102:17) Newewo unogona kunamata kuna Mwari kuti akubatsire.
Waizviziva here? Bhaibheri rinotaura kuti kana nguva yaMwari yasvika hapana munhu achawirwa nedambudziko chero ripi zvaro. *—Isaya 65:21-23.
^ ndima 9 Kana uchida kuziva kuti nei Mwari akasika nyika, verenga chitsauko 3 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.